Category:Maaltu asitti hojjatamaa Jiraa? | Oromo language Wiki | FANDOM powered by Wikia
Galmee Jechaa (Dictionary)
Maaltu asitti hojjatamaa Jiraa?
Ule laga gama baredinaf hin muran.?
Classic editor	Seena	Talk (0)	Sorting type:	Most visited
| Afaan Oromoon akka afaan hojii erga itti fayyadamamuu jal-qabamee tuttureera. Haata'u malee kitaaboleef barreefamoonni adda adda baay'ee hinjirani. Akkasumas namoonni baay'ee qubee afaan oromoo irraa kaatanii barreessu. Ana irra jalqabee. kanaaf saayitiin kun kan irra xiyyefatu wa'ee sirreeffamaaf guddina qooqa afaan oromoo irratti.
Ammaaf kan karoorfaman.
1.sirreessituu qubee afaan oromoo (spell checker) Edit
Jiirenyi dhala nama caraadhan kan guteedha jeedhen amana an. Mee jiirenya keessati namni caraa akkaami qabaata?, Jiirenya nama issa kamtuumo caroomadha?, Caraan lamaata jiirayi jeene gafaachu dandeenya?. Kanaafidha deebinsa Eyeen namni jiirenya issa keessati caraa hin qabaata; issaa kanna mirkaanesuf Umaama nama qabne ilaalu hin dandeenya. Waaqayyon Umaama jiiru huunda ergaa umme bode guuya ja'afati kotta nama akka biifaf fakeenyati hin umna jeedhe nama akka biifaf fakeenyati umme. Egaan ilaalagan namni jalqaabuma akka biifaf Waaqayyotu umaamuf caroome jeechudha. Issa qoofa mitti janaata keessa jiirenya garaa barra jiirachu, Umaama huundumaratti Aboomu,wantoota nyaatasatif ta'u irra nyaachu caroome Ilmii nama inni jalqaaba yks Adam. Garuu yeero murtae boode namni Wan Waaqayyof hin goodhin issaan jeedhe goodhe argaamusan abaarame ,janaata jiirenya baraa baraa keessa gaddi bafaame, akka du'utu itti faraadame ,akka dafqqe dafqaasan buluutu itti himaame akka ciniinsifate deesitu waliin.kun huundinu caraa keennamef sannati fayaadamu daadhabusatini. Egaan garu Waaqayyof inni nun amaanun kun garru garra lafeesa wan taef caraa lamaata kennudhaf namaaf kakaate caraan inni namni lamaata argaate garu issaa lamaata dukka tokko mitti. Waaqayyo baleesa namaaf yesusin daabare kennudhaf kakaate cubuun ilmaan namoota haa dhiifamuf,du'I haa cabuuf yesusin dabaarse garaa biiya lafaati erguu jalaate. Garu namni kan inni dua jalaa baraaramu jiirenya issaa abdaachifame jiirenya garaabira kan inni dhaluu dandau tokkicha olmaa Waaqayyo Yesus kiriistositti yoo amane qoofa kan nama dhiiba garu amuumayu namni caraa issaf kenaame kanna uttu hin fayaadamu garaa badiisa deema jiiru meqaaf meqaadha. Garu yeeronsa amaayu hin barbaane Ilmii Waaqayyo amaayu araaran haarma baliise jiiradha kotta jiirenya argaadhe ilmaanko waraan biifakon issiin u!aadhe nun jeedha gurra dhaga'u inuumti nuf haa keennu male. Egaan namni caraa jalqaaba to fayaadamu dhabuusan janaata keessa bafaame wan amma kanna ofiiti fiidu anaamo caraa lamaata Waaqayyo nuf kenne kannati fayaadamne jiirenya haa dhaalun jeedha.
2.sooftweerii barreeffama gara sagaleetti dubbisu (text to speech software) Edit
Baredu Tiya Wallahi Aniis akaah malee siyadee, Alhamdulillah anis gaguma kiya qaba, atuma nagayan naa jiradhu, ba'aa siin jaladha. hojii fii barumsa kee itii fufii On this site its forbidden to write/post pictures of anything relating to pornography or politics.
Pages in category "Maaltu asitti hojjatamaa Jiraa?"
Retrieved from "http://om.afaan-oromoo.wikia.com/wiki/Category:Maaltu_asitti_hojjatamaa_Jiraa%3F?oldid=131"
Oromo language Wiki is a FANDOM Lifestyle Community. Content is available under CC-BY-SA.